Sharciga bukaan-socodka - 1177 Vårdguiden
Waa in aad fahamto macluumaadka
Iyadoo aan loo eegin qofka aad tahay iyo halka aad ka soo jeedo waa in shaqaalaha caafimaadka ay ku siiyaan warbixinta aad u baahantahay. Tani micnaheedu waa in tusaale ahaan aad u baahan karto turjubaan ama warbixin qoran si aad u fahanto sida baaritaanku u dhici doono.
Warbixintu waa inay ku haboontahay xaaladaada iyo awoodahaaga gaarka kuu ah. Tani waxay muhiim u tahay si aad u fahmi karto oo aad qayb ugu ahaato daryeelkaaga caafimaad. Adiga laftaada ayaa dooranaya fir-fircoonidaadu intay ahaanayso, laakiin waxad mar kastaba haysataa fursad aad ku sheegto wixi aad doonayso.
Marka aad dareento inaad fahantay doorashooyinka iyo fursadaha aad haysato ayaad bixin kartaa oggolaanshahaaga, ama qaab kale u muujin kartaa oggolaansho. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad diido daryeelka caafimaad ee laguu soo bandhigay. Xitaa haddii aad bixisay oggolaanshaha daryeel caafimaad oo gaar ah waad isbeddali kartaa.
Caruurtu xitaa waa inay lahaadaan fursada in ay muujiyaan aragtidooda. Haddii ilmuhu yaryahay waxay tani u dhici kartaa iyadoo wada-jir loola sameeyay dadka haysta mas'uuliyada ilmaha, laakiin marka ilmaha da'diisu sii weynaataba waxa muhiim sii noqonaysa in iyada/isaga laga qayb-geliyo daryeelkooda caafimaaad. Si qaab fir-fircoon looga qayb-qaato daryeelka caafimaad oo loo qaato go'aan waxa muhiim ah in xitaa ilmahu fahmo warbixinaha.
Maxay warbixintu ku saabsanaan kartaa?
Waa inaad heshaa warbixin ku saabsan
noocyada qaababka jira ee baaritaan, daryeel caafimaad iyo daweyn
noocyada qalabka la adeegsado ee jira
xilliga aad filan karto inaad hesho daryeel cafimaad
natiijada laga rajaynayo daweynta iyo daryeelka caafimaad
noocyada khatar ee dhibaatooyin ama saamayn ee jira
sida xanaanada daryelka ka dib, ee aad u baahan karto ay tahay
noocyada qaababka jira ee loogu talogalay ka hortaga cudur ama waxyeelo
fursadaha in Qasnada Caymiska loo ogaan karo wixi dheeraad ah ee ku saabsan in daryeel caafimaad laga raadsado mid ka mid ah dalalka EES ama Iswiserland.
Mararka qaarkood waxay noqon kartaa in dadka aad kuugu dhow ay u baahdaan warbixin ku saabsan daryeelkaaga caafimaad. Iyadoo ay sabab u tahay sir haynta shaqada waxa dadka kuu dhow la wargelin karaa oo keliya haddii adigu aad la socoto xilliga booqashada ama aad bixisay oggolaanshahaaga.
Xilliga xaalado deg-deg ah, haddii tusaale ahaan aad adigu miyir la'aan ku jirtid oo aanad bixin karin oggolaanshahaaga, waxa aad si kastaba ha ahatee adigu helaysaa daryeel caafimaad haddii noloshaadu ku jirto halis.
Doorasho daryeel oo ka jirta dalka oo dhan
Waa inaad heshaa warbixin ku saabsan noocyada daryeelka caafimaad ee gobolkaagu bixin karo iyo haddii aad daryeel caafimaad ka heli karto gobol kale.
Laakiin waxa kale oo aad dooran kartaa daryeel caafimaad oo furan meel kasta oo ka mid ah Iswiidhan. Tani micnaheedu waa inaad dooran karto rug caafimaad ama qaabilaada daryeelka caafimaad ee takhasuska ah ee loogu talogalay booqasho ama baaritaan. Tusaale ah dhinaca daryeelka caafimaad ee takhasuska ah waa qallitaanka gacan iyo qallitaanka caadka indhaha.
Wax micno ah ma laha haddii daryeel caafimaad bixiyuhu uu yahay mid dawladeed ama mid gaar loo leeyahay balse waa inuu ahaado mid ay maal-geliso maamulka caafimaadka ee gobolku.
In la doorto ka mid ahaanshaha rug caafimaad waxa mararka qaarkood lagu magacaabaa is-qoris. Laakiin waxad mar kastaba haysataa fursada in aad tagto rugta caafimaad ee aad doonaysid gudaha Iswiidhan oo dhan. Rugta caafimaad waxa aad xitaa ka dooran kartaa dhakhtar magacaaban.
Waxa kale oo aad dooran kartaa daryeel caafimaad furan oo takhasus sare leh kuna yaala isbitaal gobol oo ka tirsan gobol kale, tusaale ahaan la sii socodka daaweynta kansarka.
Baahiyagaaga dawo ayaa muhiim
Marka aad daryeel caafimaad ka raadsato gobol kale waa baahiyahaaga dawo waxa muhiimka u noqonaya xilliga aad helayso daryeel caafimaad. Baahiyahaaga dawo waxa qiimeynaya dhakhtar. Waa inaad daryeelka caafimaad ee furan ku heshaa shuruudo la mid ah kuwa dhamaan dadka kale ee ku jira diiwaan-gelinta dadka ee gobolkaas. Tani micnaheedu waa in tusaale ahaan aad bixinayso mid la mid ah kharashka bukaan socodka ay bixiyaan dhamaan dadka kale ee raadsada daryeelka caafimaad ee furan. Adiga ayaa iska bixinaya safarada iyo kharashka cuntada iyo hoyga marka aad doorato daryeel caafimaad oo ku yaala gobol kale.
Adiga, oo ah mid ka yimi gobol kale, ma ku khuseyso damaanad-qaadka daryeelka caafimaad ee gobolkaas aad dooratay.
Qiimeyn caafimaad oo cusub
Haddii aad leedahay cudur nafta halis u ah ama si gaar ah khatar u ah ama dhaawac oo ay ku soo wajahday go'aan daryeel caafimaad oo adag waxad codsan kartaa in aad hesho qiimeyn caafimaad oo cusub. Tani waxad ka helaysaa dhakhtar kale oo aan ahayn dhakhtarka aad horay u haysatay, waa laba midkood ama gobolkaaga hoyga kuu ah ama gobol kale.
Kharashyada qiimeyn caafimaad oo cusub waxa bixinaya gobolka hoyga.
Way kala duwanaan kartaa haddii aad u baahantahay warqada dhakhtar ee u gudbinta isbitaal ama daryeel gaar ah
Haddii ay shuruuda ah u gudbinta isbitaal ama daryeel caafimaad gaar ah oo loogu talogalay daryeel caafimaadka furan ee takhashuska ahi ay ka jirto gobolka hoyga kuu ah ama gobolka aad daryeel caafimaad ka raadsatay waxa khasab ah inaad warqada u gudbinta isbitaal ama daryeel gaar ah ka haysato rugtaada caafimaad.
Haddii aanad ku qanacsanayn
Maamulka caafimaad ee gobol kasta waxa ka jirta guddiga bukaanka kuwaas oo kaa caawin doona haddii dareemaysid inaanad ka qayb-qaadasho ku lahayn daryeelkaaga caafimaad ama qaab kale aanad ugu qanacsanayn daryeelka caafimaad. Guddiga bukaanka waxay tusaale ahaan kaa caawin karaan inaad la xiriirto shaqaalaha daryeelka caafimaad ee mas'uliiyiinta ah iyo helitaanka warbixin ku saabsan sida aad uga warbixin karto wixi ku soo maray.